राष्ट्रपतिको विरोध गर्नेहरु गणतन्त्र विरोधी हुन : प्रधानमन्त्री ओली - Dainik Online Dainik Online
राष्ट्रपतिको विरोध गर्नेहरु गणतन्त्र विरोधी हुन : प्रधानमन्त्री ओली
प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०७७, बुधबार ३ : ४६
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको विरोध गर्नेहरु गणतन्त्र विरोधी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उहाँले पछिल्लो समय स साना विषयमा पनि राष्ट्रपति जस्तो निष्पक्ष र मर्यादित संस्थामाथि आक्रमण हुने गरेको भन्दै त्यसकिसिमका कार्यमा संलग्नहरु गणतन्त्र विरोधी भएको बताउनुभएको हो ।
“राष्ट्रपतिको विरुद्ध लगातार,अनवरत, हरेक स–साना निहुँमा आक्रमणको तारो बनाईन्छ । मैले त्यसलाई गणतन्त्र विरुद्धको एउटा साजिसको रुपमा मात्रै, गणतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र गणतन्त्र ठिक होइन भन्ने कुरालाई लैजाने रुपमा बुझेको छु । के गर्नुपथ्र्यो त राष्ट्रपतिले ? चुपलागेर बस्ने राष्ट्रपति चुप लागेर बस्या छ । त्यो भन्दा बढी राष्ट्रपतिले के गर्नुपथ्र्यो ?”
राष्ट्रपतिलाई निष्पक्ष मर्यादित संस्थाको रुपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
राष्ट्रप्रमुख तर कार्यकारी अधिकार नभएको राष्ट्रपतिको रुपमा सम्मानित संस्थाको रुपमा राख्ने गरिएको भन्दै उहाँले जुनसुकै विषयमा सम्मानित संस्थामाथि आक्रमण गरिनु नहुने भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति छोड्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरु राष्ट्रपतिमाथि खनिने गरेका छन् । कार्पेट कहाँनेर राखियो प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउँछ ? त्यो गर्ने काम हो प्रधानमन्त्रीको ? जे मा पनि राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने र दलगत रुपले हेर्ने कुरा उचित होइन । दुवो काटेर चौरी चिटिक्क पारियो । अहिले चौरी चिटिक्क पार्ने कि कोरोनाका विरुद्ध लड्ने भन्ने ? अनि राष्ट्रपतिले कोरोनाका विरुद्ध नलड चौरी चिटिक्क पार् भन्या हो र ? ”
कोरोना नियन्त्रणमा अधिकतम उपलब्धि हासिल
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अधिकतम उपलब्धि हासिल दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारका कामसंग आफु सन्तुष्ठ रहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “कोरोना यस सरकारको कमजोरीका कारण आएको होइन । विश्वव्यापी रुपमा आएको छ । प्रभावकारी ढंगले सामना गरिरहेको छ । भुटान बाहेक अरु देशको तुलनामा नेपालको राम्रो छ । विश्वव्यापी महामारीको सामाना प्रभावकारी ढंगले गरिरहेको छ/गर्ने छ । कोरोनाबाट देशलाई मुक्त गर्छ । सरकारले अघि सारेको दृष्टिकोण, हासिल गरेका उपलब्धि कुन चाही कुरामा असन्तुष्ठ हुनुपर्ने छ ? कोरोनाका कारण उत्पादन वृद्धि दर हासिल भएन, यो सरकारको कमजोरी होर ? यसलाई आलोचना गर्ने विषय पाईयो भन्ने हो ?”
उहाँले भैसी व्यापारीले किन्ने मान्छे आएपछि दुध भन्दा चिल्ला सिंङ देखाउने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै सरकारका राम्रा काम भन्दा अन्यत्र ध्यान केन्द्रीत गराउने प्रयास भएको गुनासो गर्नुभयो । जहाजका कुरा गर्दा सरकारलाई उडाउने गरिएको स्मरण गर्दे उहाँले आफ्नै झण्डा राखेर पानी जहाज चलाउने तयारीमा सरकार लागि रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालीहरुमा कोरोना रोगप्रतिरोधी क्षमता बढी भएको भनेर कस्ले भनेको भन्ने सांसदको प्रश्नमा उहाँले ठट्याउली शैलीमा भन्नुभयो “नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भनेर कस्ले भन्यो भन्नुभयो, मैले भने भर्रखरै सुन्नुभयो नि । ” उहाँले नेपालीहरुको नमस्ते गर्ने शैली सबैले अनुसरण गरेको दृष्टान्त दिदै आर्युवेद, योग लगायत नेपालको औषधीजन्य वनस्पतिको लामो व्याख्या गर्नुभयो ।
अर्के रोगका कारण मृत्यु भएको भएपनि कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरुप कोरोनाबाट मृत्यु भएको मान्नु परेको भन्दै उहाँले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारका काम प्रभावकारी भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “कमजोरी लुकाउनुपर्ने? अरु देशमा त्यत्रो नोक्सानी परया छ । त्यतिका मान्छे मरेका छन् । त्यहाँ लुकाउनु नपर्ने । यहाँ १५ जना मर्दा कमजोरी लुकाउनुपथ्र्यो ? कोरोनाबाट अरु मर्न नदिने हाम्रो प्रयास छ । ”
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मा दिने कार्य स्वभाविक भएको भन्दै सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नुभयो । विगतमा पनि सेनाले हतियार, हेलिकोप्टर प्लेन लगायत किन्ने गरेको र त्यतिबेला व्यापारीक नभएर अहिले व्यापारीक भन्ने नमिल्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो । उहाँले नेपाली सेनालाई नेपाल सरकार भन्दा बाहिरको संस्था भए जस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “राम्रो कुरा गर्न नजान्ने, नगर्ने र नराम्रो कुरा गर्नु धर्म ठान्ने देखिएको छ । खरिद नगर्दा पनि भएन । खरिद गर्दा पनि भ्रष्टाचार बाहेक केही नदेख्ने । केही उद्देश्यसाथ लाग्ने । ”
उहाँले विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गृहमन्त्रालयको भूमिका नखोसिएको भन्दै भ्रमपुर्ण कुरामा नपर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन अनुसारका संरचनाले प्राकृतिक प्रकोपलाई मात्रै सम्बोधन गरेको र महामारीलाई सम्बोधन नगरेकाले अर्को संयन्त्र गठन गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “विशाल गु्रुप भन्या कुन हो । जथाभावी नै बोल्ने हो भने त बेग्लै कुरा हो । यस्तो कुराहरु सांसदजस्तो जनप्रतिनिधिले बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको त्यस तर्फ ध्यान गएको छ । कही कुनै प्रकारको अनियमितता र अनुचित कुरा भएको पाईए छानविन हुने र कारवाही हुन्छ । यो सरकार राष्ट्रिय हितको पक्षमा काम गर्ने स्पष्ट पार्छु ।”
भारतीय पक्षबाट बाँध
उहाँले भारतीय पक्षबाट बाटोको नाममा बाँध बनाउदै गरेको जानकारी गराउदै त्यस्ता कार्य असल छिमेकी र अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित भएकाले त्यसबारे नेपाल सरकारले भारतलाई सजग गराईरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भारत सरकारले पछिल्ला गल्ति सबै सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । न्यायोचित कुराको हकमा लड्न हिचकिचाउने सरकार नभएको र सार्वभौम समानताको नीतिको आधारमा व्यवहार गर्ने गरेको तथा सोही अनुरुप अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो।